Meesha xun iyo tan togan ee astaanta uu abuuray John Randall | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanka booska taban ee togan ee astaanta uu abuuray John Randall
Wax yar ka yar sanad ka hor ayaan faallo ka bixinayay shaqada weyn ee ka jirta astaanta calaamadda khamriga ee Yacquub Creek taas oo a isticmaalka weyn ee farshaxanka meel bannaan iyo togan.
Hadda waxaan haynaa naqshad kale oo caan ah oo loogu talagalay makhaayad, Swan & Mallard, oo uu John Randall, naqshadeeyaha, ku abuuray tusaale ahaan ku saabsan sida loo adeegsado meel taban oo togan. Qaadashada qaabka swan ee muuqaalkeeda daboolaya tan duck dhabta ah si loogu aqoonsado isla astaanta madow, oranji iyo caddaan ah saddexda midab ee ugu badan.
Meesha xun ee naqshadeynta calaamaddu waa ta hareeraheeda ah u dhexeeya mawduuc sawir ku dhex jira. Meel qeexaysa fikrad sida ka dhacda astaanta uu sameeyay Randall taas oo caddaanku mas'uul ka yahay siinta qaabka oo dhan duck runta ah oo ay oranjadu ku tahay dhibcaha midowga labada xayawaan.
Waa Randall laftiisa oo ka faallooda degelkiisa, saddexda dhinac ee ugu muhiimsan in aan doonayay in aan aqoonsado kuna muujiyo astaanta anigoo ku xiraya swan iyo mallard meel wanaagsan oo taban. Midab xaddidan oo midab leh iyo qaabka ugu yar ayaa ka caawiya abuuritaanka dareen isku dheelitiran.
Naqshadeynta ayaa diiradda saareysa, sida uu yiri Randall, iskuday abuur dhoolacadeyn maskaxda kuwa ha arkaan. Astaan ​​aad u fiican oo marka jaleecada hore la arko swan loo arko inay tahay S for Swan, si aad xoogaa diirada u saarto astaanta waxaad ka heli kartaa mallard oo si toos ah u fiirinaya qofka daawanaya.
Mid ka mid ah tusaalooyinkaas oo aan jecelnahay inaan soo qaadno khadadkan si aan u muujino taas cajaa’ib ku lahaanshaha astaanta ma sahlana si loo helo, waxayna ku qaadataa naqshadeeyayaasha sida Randall inay abuuraan sawir u gaar ah badeecad ama adeeg.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Farshaxanka booska taban ee togan ee astaanta uu abuuray John Randall
"Aqbalaad", acrylic waxaa qoray Christopher Walker
Nooca rasmiga ah ee anime ee jilayaasha Harry Potter